Inona no vaovao ao amin'ny Mozilla Thunderbird 78.3.1 | Avy amin'ny Linux
Mozilla dia namoaka vaovao Malagasy Bible de Thunderbird, ny mpanjifa mailaka malaza izay nahatratra ny anao Malagasy Bible 78.3.1.
Araka ny fantatsika tsara, Thunderbird dia iray amin'ireo mpanjifa mailaka tsara indrindra, ihany koa ho afaka sy hatsaraina isaky ny famoahana vaovao.
La Malagasy Bible Ny farany dia 78.3.1 ary araka ny voalazan'i Mozilla dia iray ihany ny fanavaozana lehibe amin'ity famotsorana ity.
Ity patch ity dia manamboatra olana iray nateraka Thunderbird 78.3.0 nijanona tsy nampoizina. Sahala amin'izany inona ny vaovao Malagasy Bible miasa toy ny vonjy taitra tampoka ary manampy fitoniana Thunderbird.
Avy amin'izany, Thunderbird Ny 78.3.1 dia miaraka amin'ny fanatsarana rehetra teo alohany; la Fampiharana OpenPGP voadio, ary i Mozilla dia mitondra fanatsarana ny fahombiazan'ny decryption Ny hafatra sy ny interface mba hanafenana lakile vahiny dia tsy mandeha amin'ny laoniny.
Ireo no fanatsarana ao OpenPGP misy amin'ity vaovao farany:
Fanatsarana ny zava-bita decryption hafatra lava
Aza mampiseho ny interface fanalahidy vahiny rehefa tsy mandeha ianao
Tsy mifidy azy ny famoronana lakile vaovao ho azy ho fampiasanao
Toy ny mahazatra dia mamporisika ny hanavao faran'izay haingana araka izay azo atao i Mozilla, tsy ho an'ny fanatsarana farany ihany koa ihany koa ho an'ny fanamboarana fiarovana kely. Ny kinova farany dia mifanaraka amin'ny Linux, Windows ary Mac.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Inona no vaovao ao amin'ny Mozilla Thunderbird 78.3.1
Asmedrel dia hoy izy:
Ity ve ilay rindrambaiko afaka mitantana kaonty mailaka marobe avy amin'ny interface iray?
Mamaly an'i Asmedrel
Luis Lopez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Luis Lopez
Fornero dia hoy izy:
Amin'ny fotoana fanavaozana ny Thunderbird 68.
Mamaly an'i Fornero
Nifindra tany amin'ny Matrix i Gitter ary nitambatra tamin'ny Element Matrix
Ahoana no hiarovana ny findainao amin'ny hackers